Chii chinoitika kuti musikana anzwe kuda kusvirwa or kuti kabhinzi kake kamire? - Masasi eHarare
DzeBonde Chii chinoitika kuti musikana anzwe kuda kusvirwa or kuti kabhinzi kake kamire?
Chii chinoitika kuti musikana anzwe kuda kusvirwa or kuti kabhinzi kake kamire?
Chii chinoitika kuti musikana anzwe kuda kubatwabatwa?
Vasikana nevakomana vese vanoita zemo kana kuti havi yekuda kuisana neumwe munhu. Zvinotangira mupfungwa kuti uri kufungei. Kana ukatanga kufunga nyaya dzakarerekera pakudanana nekuisana nemukomana/murume, kana kuwona vamwe vachikisana kana kuisana, kana kunzwa umwe achichemerera ukaziva kuti ari kuisana nemurume wake, unotanga kufunga nezvokuiswa.
Pfungwa ikangorerekerako muviri wako wototanga kuita zemo. Unonzwa pamberi pototanga kudavira, kunyevereka and bhinzi inotangawo kumira, matinji ozvimbirira, kuzasi kotanga kunyorova. Zvivhudzi zviri paganda zvisingaoneki zvowedzera kumira plus minyatso inokwanisawo kumira.
Ukazobatwabatwa nekupuruzirwa nekukisiwa nemurume unonzwa kunakirwa nazvo. Kana ari murume wako munobva matoisana zvowedzera kunakirana. Kana asiri wako unokwanisa kuti ukazviregeredza wotohura naye. Bheta kusimuka woenda, ukasvika kumba uchine zemo wozvinakira nemaoko. Maoko haakupi chirwere plus haakuitisi mimba.
musikana anzwe kuda kusvirwa